Qeybinta dhalashada ee rhizome | January 2020
Sida loo daryeelo spathiphyllum, xeerarka koraya ubax guriga
Warshad taajir leh leh inflorescences caddaan iyo caleemo cagaaran oo waaweyn - Spathiphyllum, loo yaqaan ubax dumar ah farxad. Waa farxad weyn in lagu muujiyo hareeraha ubaxa si fiican u koray iyo spathiphyllum si aad u jecel ee dhirta indoor. Inkasta oo warshadani aysan ahayn mid aad u furan, haddana waxay u baahan tahay daryeel gaar ah, iyada oo aan taas oo aysan u muuqan mid soo jiidasho leh.
Callas: qarsoodiga ah ee sii koraya guriga
Calla waa geedo culus oo ka mid ah qoysaska caruuta. Calla waa ubax qurux badan oo qurux badan oo leh muuqaal muuqaal leh. Cinwaanka ubaxa ee Calla wuxuu yeelan karaa siyaalo kala duwan oo jaban, taas oo ka dhigaysa mid aad u caan ah ee beerta. Xaaladaha ugu habboon ee loo yaqaan callas guri, inkastoo xaqiiqda ah in wicitaanada naga yimid Koonfur Afrika, oo ku yaalla dhulalka gawaarida ee tropical, waa geedka ciriiriga ah oo adag.
Talooyin sare oo ku saabsan ubaxyada iyo beeritaanka Brunners
Bannaanka beerta waxay u mahadcelineysaa dhirta xaqiiqda ah in caleemaha qurxinta leh midabka hore u muuqdaan beerta, iyo ubaxyada yar yar ee buluuga ah ay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya ee lagu farxo isha ubaxa. Waxay dhashaan caraf udgoon leh, taas oo aad haysato waqti aad ku seegto jiilaal dheer. Intaa waxaa dheer, Brunner waa wax aan qabin ee daryeelka, iyo kala duwan ayaa lagu soo xuli karaa iyada oo la raacayo sifooyinka xalalka dhulka.
Marka la eego marwalba cimilada kulaylka ah, ubax kasta wuxuu doonayaa inuu u guuro beertiisa. Ma aha wax la yaab leh in guntu ay soo jiidato isha oo leh caleemo cufan iyo ubaxyo jilicsan. Diidmada asaasiga ah ee dhirta kale, waxay u muuqdaan inay yihiin kooxda, sababtoo ah xaaladaha wanaagsan waxay u fidiyaan ilaa laba mitir iyo nus. Haa, iyo xannaanadu ma aha mid soo jiidasho leh.
Lakonos: qarsoodiga ah ee sii kordhaya "martida American"
Lakonos waa geedka dilka ah ee qoyska Laconosa (Magaca Laatiinka waa Fitolacca). Cirridka dhirta waxaa ku jira in ka badan 35 nooc (liana, geedo, qoryo). Dhibaatooyinkayaga, waa lakulo American ah. Waxay leedahay miro wareegsan oo jilicsan iyo buraashyo fara badan. Caleemaha waa wareegsan ama dhoobo, ilaa 20 cm dheer iyo 6 cm ballaaran.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qeybinta dhalashada ee rhizome 2020